PressReader - Ilanga: 2017-09-14 - Abesifazane yizinsika zamakhaya
Abesifazane yizinsika zamakhaya
Ilanga - 2017-09-14 - Izindaba -
NAKUBA usuku luwele kule nyanga yamasiko, nokho ibandla iLife Changing Ministries elizinze enkabeni yedolobha iNquthu, enyakatho yeKwaZuluNatal, liyivalelise ngegiya eliphezulu inyanga yabesifazane ngengqungquthela yabo lapho behlomule ngolwazi oluningi emikhakheni eyahlukene.
Abaholi baleli bandla, uMphostoli Thandanani Goodman Nala nowakwakhe, uNkk Nomaza Nala, intuthuko yomphakathi abasebenza kuwona yinto esuka ngaphakathi ezinhliziyweni zabo. Ngaphandle kokuhola ibandla, uMphostoli Nala ungumsunguli wesikole esizimele esikhona eNquthu futhi esisebenza ngempumelelo.
Umongo wale ngqungquthela ubumayelana nokuthuthukiswa kwabesifazane ngokuqonda ukuthi yibona abayizinsika zamakhaya. Obesingethe lo mcimbi bekunguNkk Nala - ongumkaMphostoli Nala - kanti umphathi wohlelo bekunguMillicent Mashile ongumethuli wohlelo olusihloko sithi Alpha Youth oluboniswa kwiGospel Channel 331 DSTV.
Phakathi kwezimenywa eziyizikhulumi eziqavile, bekukhona uMbhishobhi Sibusisiwe Isabel Ntombela webandla i-Potter’s House eNewcastle noMfu Khethiwe Ndaba oqhamuka oSizweni Community Church khona eNewcastle. Abebethamele le nkonzo bekungamakhosikazi abefundisi abevela ezindaweni ezahlukene, abefundisi besifazane,
OFAKE isigqoko esiwukhakhi nengubo ebomvu, nguNkk Nomaza Nala emi namakhosikazi abefundisi eNquthu ngoMgqibelo odlule.